Ungayenza kanjani i-WhatsApp yakho ivikeleke kakhulu futhi uyivimbele ukuthi ingantshontshwa | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, WhatsApp
I-WhatsApp manje isiyindlela eyinhloko, futhi kwesinye isikhathi ukuphela kwendlela yokuxhumana yabasebenzisi. abasebenzisi abangaphezu kwesigidi esisodwa ukuthi uyifakile kumadivayisi akho. Ukuthembela esicelweni sakho konke ukuxhumana kwethu kungaba yinkinga, ikakhulukazi uma singaqapheli.
IWindows yeMicrosoft ibilokhu ihlaselwa ngabaduni, ngoba iyisistimu yokusebenza esetshenziswa kakhulu emhlabeni. Kodwa-ke, njengoba umakhalekhukhwini usuyinto eyinhloko yokusetshenziswa, esikhundleni sama-PC ezikhathini eziningi, kufanele sinakekele ngokukhethekile nge-smartphone yethu.
Ukuvikela i-akhawunti yethu ye-WhatsApp kuyinkqubo elula kakhulu futhi ayinazinkinga ezinkulu, inqobo nje uma sisebenzisa ukuqonda. Ngezansi sikukhombisa amathiphu ahlukahlukene uma ufuna i- I-akhawunti ye-WhatsApp iphephe nokuthi akekho umuntu ongakutshontshela yona.
Vikela i-akhawunti yethu ye-WhatsApp Kuyinqubo elula kakhulu engadingi ulwazi olukhulu futhi esingayenza ngezindlela ezimbili ezihlukene, kusuka kuhlelo lokusebenza uqobo nangaphandle.
1 Vikela i-akhawunti yakho ye-WhatsApp ngaphakathi
1.1 Ungayinaki imiyalezo esithunyelwa yiWhatsApp
1.2 Qaphela izixhumanisi
1.3 Vala izikhathi zewebhu esivule kuzo kukhompyutha noma kuthebulethi
1.4 Vikela ukufinyelela kuhlelo lokusebenza
1.5 Yenza kusebenze ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili
2 Vikela i-akhawunti yakho ye-WhatsApp ngaphandle
2.1 Vikela ukufinyelela ku-smartphone yethu
2.2 Qaphela izinhlelo ezinikela ukuvikela i-akhawunti yakho ye-WhatsApp
3 Ungayithola kanjani i-akhawunti ye-WhatsApp
Vikela i-akhawunti yakho ye-WhatsApp ngaphakathi
Ungayinaki imiyalezo esithunyelwa yiWhatsApp
WhatsApp awusoze waxhumana nathi ngeplatifomu yakho. Noma kunini lapho udinga ukusithumela khona umlayezo wokuqinisekisa lapho ubhalisa, shintsha inombolo yethu yocingo noma kufanele uqinisekise ubunikazi bethu, UZOKWENZA NJALO ngemilayezo ebhaliwe.
Uma uthola umyalezo ngeWhatsApp othi yipulatifomu uqobo, into yokuqala okufanele uyenze bika inombolo emsamo ngenhloso yokuvimbela abanye abantu ekukhohlisweni futhi bantshontshelwe i-akhawunti yabo. Okulandelayo, uma sekubikiwe inombolo yocingo ethi uyiWhatsApp, kufanele uwususe ngokushesha umyalezo.
Imilayezo ipulatifomu yokuthumela imiyalezo engasithumela yona ngohlelo uqobo iyohlala icela ikhodi esiyitholile nge-SMS, ikhodi edingekayo uma kungenzeka ukuthi sifaka i-WhatsApp kwamanye amadivayisi ahlobene nenombolo yocingo efanayo. Leyo khodi iyadingeka yebo noma yebo kuye qinisekisa ukuthi singabanikazi abafanele benombolo yocingo.
Emfanekisweni ophethe isigaba esedlule, singabona isixhumanisi, isixhumanisi esiholela kuwebhusayithi yeWhatsApp, ngakho-ke iphephe ngokuphelele futhi ngeke sibe nankinga nge-akhawunti yethu. Kodwa-ke, uma sithola umlayezo onesixhumanisi esiya kuwebhusayithi engeyona eye-WhatsApp, ethi siyinsizakalo yemiyalezo, akufanele neze siyicindezele nokuncane kakhulu ukufaka noma yiluphi uhlobo lwedatha oyicelayo.
Vala izikhathi zewebhu esivule kuzo kukhompyutha noma kuthebulethi
Ngokuya ngenani lamahora esiwachitha phambi kwekhompyutha, kungenzeka ukuthi ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa sizoba nengxoxo ngeWhatsApp Web, isevisi esivumela ukuthi sisebenzise i-WhatsApp kusuka kusiphequluli ngaphandle kokusebenzisana ne-terminal yethu, njalo uma ivuliwe.
Uma sisebenzisa amakhompyutha ahlukene ukuxhuma kwi-akhawunti yethu ye-WhatsApp, amakhompyutha okungewona awethu, okungcono kakhulu esingakwenza phuma njalo lapho siyeka ukuyisebenzisa. Ngale ndlela sizovimbela abanye abantu abakwazi ukufinyelela kulawo makhompyutha ukuthi bangaboni izingxoxo esizigcine kudivayisi yethu.
Vikela ukufinyelela kuhlelo lokusebenza
I-WhatsApp iyasivumela vikela ukufinyelela kwesicelo ukuze uvimbele abantu abasendaweni yethu ukuthi bangakwazi ukufinyelela kudivayisi yethu, uma beyazi ikhodi yokuvula yesiginali yethu noma uma siyishiye okwesikhashana ngaphandle kokuvimba. Akunandaba noma ngabe amatheminali wethu we-Android noma we-iOS ukufaka ikhodi yokusebenzisa, kufanele singene Amasethingi> Akhawunti> Ubumfihlo nokukhiya isikrini.
Uma ngabe idivayisi yethu iyi-Android, kufanele singene kuhlelo lokusebenza bese sifaka izilungiselelo
Yenza kusebenze ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili
Ukuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili sekube ngenye yezindlela eziphephe kakhulu zokuvikela i-akhawunti yethu futhi namuhla kunikezwa izinkampani eziningi ezinkulu ezinikezela ngezinsizakalo eziku-inthanethi noma izicelo zamadivayisi eselula. Lolu hlelo lokuvikela, iyatholakala nakuWhatsApp.
Ukusebenza kokuqinisekisa ngezinyathelo ezimbili ku-WhatsApp kusivumela ukuthi sisungule ikhodi enezinombolo eziyi-6, cIkhodi ongayisebenzisa lapho ufaka uhlelo lokusebenza kudivayisi entsha yeselula. Ngaphandle kwale khodi akunakwenzeka ukufinyelela i-akhawunti yethu ye-WhatsApp, ngakho-ke akufanele sabelane ngayo nanoma ngubani.
Vikela i-akhawunti yakho ye-WhatsApp ngaphandle
Vikela ukufinyelela ku-smartphone yethu
Noma kungabonakala kungajwayelekile futhi ngaphandle kokuthi wonke amadivayisi asinikeza uhlelo oluthile lokuvikela, sisengathola abasebenzisi abaningi abangenalo uhlelo lokuvikela ku-smartphone yabo, kungaba ngokusebenzisa izigxivizo zeminwe, ngephethini, ikhodi yokuvula noma ngohlelo lokuqaphela ubuso.
Qaphela izinhlelo ezinikela ukuvikela i-akhawunti yakho ye-WhatsApp
Ngezikhathi ezithile, ku-Android, izinhlelo zokusebenza ezithi zivele ku-Android Play Store sinikeze ukuhlanganiswa kokuphepha kusicelo semilayezo esisetshenziswa kakhulu emhlabeni. Lezi zinhlobo zezicelo azikwenzi ukuvikeleka esivele sikunikezwa yiWhatsApp, futhi okuwukuphela kwento esingayizuza uma siyifaka ukuthi isiphuca i-akhawunti yethu.
Ungayithola kanjani i-akhawunti ye-WhatsApp
Uma sinebhadi lokulahlekelwa ukufinyelela ku-akhawunti yethu, okuwukuphela kwento esingaba nayo yokuthola i-akhawunti yethu nge-imeyili elula, ikakhulukazi ngemeyili support@whatsapp.com, i-imeyili lapho kufanele sithumele imininingwane elandelayo ehlobene ne-akhawunti yethu:
Inombolo yocingo ye-akhawunti ye-WhatsApp, kufaka phakathi ikhodi yezwe.
Imodeli yokuphelal kusuka lapho sisebenzise khona i-WhatsApp.
Incazelo yalokho okwenzekile. Uma sifuna ukuthola impendulo ngokushesha okukhulu, kufanele sibhale i-imeyili ngesiNgisi. Uma siyibhala ngeSpanishi, kungenzeka ukuthi impendulo evumayo nengakhi evela ku-WhatsApp izothatha isikhathi eside kunokulindelekile.
Uma isizathu osicelayo sokubuyisa i-akhawunti yakho ayihlobene nokwebiwa kwayo, kodwa phambilini i-akhawunti yakho ibimisiwe, kungenzeka ukuthi kulokhu kube ngeyokugcina futhi ngeke ukwazi ukubuyisa i-akhawunti ye-WhatsApp ehambisana nenombolo yakho yocingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayenza kanjani i-WhatsApp yakho iphephe futhi uyivimbele ukuthi ingantshontshwa
Ungawuthola kanjani umculo ku-Spotify